Phuket ~ Journey-Assist - Torapasika sy faritry ny Phuket
Pejy fandraisana » Таиланд » Asia » Eran-tany / Faritra » Phuket
Phuket dia tsy midika mihitsy hoe nosy kely misy toerana mahafinaritra. Eto dia afaka mahita zavatra tokony hatao foana ianao. Ao Phuket, misy endrika manintona ny natiora, toy ny fantsona, ny riandrano, ny tendrombohitra, ny ala virijina, ary ny tsangambato kolontsaina - ny tranombakoka sy ny tempoly. Afaka mahita zavatra mahaliana ho an'ny tenany ny tsirairay.
Na dia iray amin'ireo toeran-tsena lafo vidy indrindra any Thailandy i Phuket, dia manamarina izany ny tahan'ny vidiny toy izany. Ny fialan-tsasatra eto dia mbola mora lavitra noho ny any amin'ny fivahinianan'i Eropa.
New Phuket Aquarium (Aquaria)
Renirano Nai Yang Overview
Malemy ny fotodrafitrasa any amoron-dranomasina. Tsy misy resaka resaka fandroana ny fandroana, ary ny trano fidiovana dia tokony hita ao amin'ny trano fisotroana akaiky
Fandriana masoandro sy elo. Ny vidin'ny hofany amin'ny 200 baht.
Fametrahana fiara ho an'ny bisikileta - 20 baht.
Toerana ao amin'ny Pantai Nai Yang
Ao amin'ny morontsiraka avaratra andrefan'i Phuket, eo anelanelan'ireo torapasika, ny Pantai Nai Yang Beach Knighton и Mai Khao
Tsy mandeha eto ny fitateram-bahoaka. Ny bisy manakaiky ny moron-dranomasina dia avy amin'ny terminal bus taloha tao Phuket Town. Ny saran-dalana dia 90 baht. Handeha amin'ny seranam-piaramanidina izy. Ary mila miala eo amin'ny famantarana ny Mai Khao ianao. Fa manomboka any mankany morontsiraka dia mbola mila misambotra taxi ianao na tuk-tuk.
Ny tena mety indrindra dia ny mandeha any amoron-dranomasina amin'ny bisikileta na fiara manofa.
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny navigateur https://goo.gl/maps/pXxje9FerLQzqPyg8
Sarin-tsarin'i Nai Yang Beach
Nai Thon Beach Overview
Toe-piainana eo amoron-dranomasina. vidin'ny
Ny vidin'ny any amin'ny kafe sy ny fivarotana eo an-toerana dia somary avo kely kokoa noho ny ankamaroan'ny tora-pasika any Phuket
Momba ireo lesoka, dia satria tsy nojerena tsara io, ary matetika eo amoron-dranomasina no ahitanao ireo rantsan-tanana sy cones ary zavatra maro hafa, nateraky ny onja.
Aiza no misy. Ahoana no hahatongavana any
Ary ny minus-ny koa dia ny toerany. Ny maha-akaiky ny seranam-piaramanidina dia misy tambiny iray, saingy ny minus dia ny halaviran'ny zava-dehibe indrindra ao Phuket.
Tsy mandeha eto ny fitateram-bahoaka. satria na bisikileta manofa na fiara, na taxi-be na mandondona.
Ny bisy manakaiky ny seranam-piaramanidina dia avy amin'ny gara taloha ao Phuket Town. Nefa raha lavitra ny lalana mankany amin'ny tora-pasika, ary voatery handray taxi na tuk-tuk ianao.
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/9MNwE1P2HR6PHyJ1A
Sarin'i Nai Thon Beach (Naithon)
Sarin'i Bang Tao Beach
Morontsiraka surin Overview
Ny fidirana amin'ny ranomasina dia malemy fanahy, i.e. ny tora-pasika dia mahazo aina tsara amin'ny lomano. Tsy ampy ny alokaloka eto fa arakaraka ny habetsaky ny masoandro sy ny elo (raha mandoa vola izany, mazava ho azy).
Famili Mart sy Sevan Ilawen (7-11) dia akaiky ihany koa.
Ny vidin'ny hofan'ny trano fandraisam-bahiny dia eo anelanelan'ny 200 sy 300 baht.
Ho an'ny fiara fitaterana fiara dia mifanentana amin'ny sehatra baolina kitra, izay hita kely eo amin'ny sisin'ny vavahady lehibe, akaikin'ny tempoly. Tsy misy vidin-tsofina
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/3ZbdoJFeu2GwvKwQ7
Toe-piainana ao amin'ny Kamala Beach
Fotodrafitrasa tsara amoron-dranomasina io. Misy mandro be, trano fidiovana. Azo atao tokoa 200 baht alaina sy seza saika miaraka amin'ny elo. Amin'ny dia an-tongotra lavitra be dia be ny kafe izay mifantoka amin'ny tetibola hafa tsy mitovy. Eo ihany koa ny fiara fitateram-bahoaka sy ny fiara. Misy tombony voajanahary foana amin'ny hazo.
Raha reraka ianao Patong avy amin'ny fiakaran'ny tanàna, ny torapasika milamina ao Kamala dia ho fifaliana ho anao
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/RMurFajBu7Wxpovb7
Photo of Kamala Beach
Any amin'ny faritry Beach Beach no misy an'io. Ny tena tombony amin'ity tora-pasika ity dia ny fotodrafitrasiny mahasoa, misy ny fivarotana maro, trano fisakafoanana ary trano fisakafoanana maro. Inona no dikan'ilay Lalotra Bangla malaza eran-tany? Ny fiainana mavitrika indrindra eto dia manomboka aorian'ny filentehan'ny masoandro. Eny, amin'ny ankapobeny, ity tora-pasika ity, sy ny faritra misy ny anarana izay misy azy io, dia mifantoka indrindra amin'ny "fivoahan'ny antoko". Ary raha liana amin'ny natiora sy miala voly ianao dia mila torapasika hafa
Ny fotodrafitrasa amin'ny ranomasina Patong. vidin'ny
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/u3VXwahZ8KbZz4pr6
Sarin'i Patong Beach
Karon Beach Overview
Toe-piainana ao amin'ny Karon Beach
Ahoana ny fomba hankanesana any amin'ny Karon Beach
Ny rano eto na madio na tsy be (miankina amin'ny toetrandro sy vanim-potoana). Kely ny fasika quartz eto ary misy ny riandrony ao ambanin'ity tora-pasika ity.
Tondro ho an'ny fanamoriana eo amin'ny sarintany - https://goo.gl/maps/RmHAHYUAnzFQ2xtn6
Sarin-tsary Kata Kata
Teny Noi Beach Overview
Fotodrafitrasa teny Noi Beach
Fa amin'ny ankapobeny, tena misy ny zava-drehetra. Fandriana masoandro ho an'ny hofan-trano, trano fidiovana, fandroana eto. Satria misy kafe misy vidiny mirary. Misy ny hetsika amoron-dranomasina. Scooter rano, fanofa kayak, parasailing.
Amin'ireo minus - ny aloky ny voajanahary eo amoron-dranomasina dia mazava fa tsy ampy, ary eo amoron-dranomasina dia matetika misy rano misy ahidrano.
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/ZKATPkzv8mn2wrPo9
Sarin-teny Kata Noi Beach
Sarin'i Pantai Nai Harn
Eny an-dàlana izay avy any Naithon mankany Bang Tao, dia misy tanàna Banana kely izay tsy dia malaza loatra. Afaka midina eny an-dàlambe ianao miaraka amin'ny làlan-kavozo eo afovoan'ny hazo.
Banana Beach dia manana habe kely kely indrindra (ny halavan'ny tora-pasika rehetra tsy mihoatra ny 100 m). Tsy vitsy anefa ny olona eto. Indrindra amin'ny hariva. Misy kafe ao amin'ny tranokala. Ny fiara na bisikileta iray dia tokony havela hijanona eo akaikin'ny arabe. Akaiky eo dia misy faritra kely iray sahaza ho an'ny parking.
Tsy misy trano fandraisam-bahiny tsy eo akaikin'ny tora-pasika. Ary amin'ny ankapobeny, ny moron-dranomasina dia tsy manana ny korontana sy ny feo an-tanàna izay misy amin'ny ankamaroan'ny torapasika Phuket.
Na dia isan-taona aza dia mihamalaza hatrany hatrany ity tora-pasika ity ary miaraka amin'izany dia very ny maha-izy azy.
Avy eny amoron-dranomasina dia afaka mijery masoandro mafana loatra.
Madio be ny rano eto, ary malefaka ny fasika. Misy toerana somary mangingina sy soroka eo anelanelan'ny hazo rofia eny amoron-dranomasina. Amin'ny ankapobeny, toerana tena tsara ho an'ny fialantsasatra amoron-dranomasina miala voly.
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/2NNfPhMHE6SExriJ6
Sarin'i Beach Laem Sing
Io amoron-dranomasina io no misy ny faritra avaratr'i Phuket. Kalim dia fantsom-pasika kely fotsifotsy be akaikin'ny lalana. Vitsy ny olona eto. Mitombo ny halalin'ny ranomasina, misy onja. Surfers indraindray tonga eto.
Toe-piainana eo amoron-dranomasina. Azonao atao ny snorkel
Ny ilany avaratr'i Kalim dia manana ny endriky ny morontsiraka vatolampy. Amin'ny tondradrano matevina dia manangona trondro ao ny mponina. Kalima dia mandeha amin'ny moron-dranomasina Patong.
Any amoron-dranomasina, ao amin'io faritra misy vatolampy ambany io, misy kely ary snorklit. Mangarahara ny rano ao, ary be dia be ny trondro.
Ny serivisy eo amoron-dranomasina dia mahatonga anao hanantena ny tsara indrindra. Toilets very, tsy misy orana mihitsy. Madio anefa ny rano, tsy marobe ny olona. eny akaikin'ny promenade be dia be ny trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana, ary tena akaiky dia misy hatrany omby roa miaraka amin'ny grill.
Amin'ny vanim-potoana, tsy lavitra ny moron-dranomasina, misy ny fitokonana miaraka amin'ny mpanamory, noho izany dia misoloky ny voalavo amin'ny tora-pasika amin'ny hariva :).
Misy toerana be dia be ho an'ny sary ihany koa, ary ny morontsiraka Kalim dia mirehitra masoandro milentika! :).
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/TzFwt2Q2rPxkQt727
Sarin'ny Pantai Kalim
Mai Khao Beach dia torapasika malaza any Phuket. Misy refy lehibe, 11km ny halavany. Any amin'ny Valan-javaboary Sirinat no misy azy. Ity dia iray amin'ny toerana tena tianao amin'ny mpitsikilo - olona izay te-hijery amin'ny haingam-pandeha ary haka fiaramanidina.
Ao Khao Beach Photo
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny tora-pasika no tsidihin'ny mpizahatany Rosiana misimisy kokoa mandositra ny Patong miroborobo. Amin'ny vanim-potoana any, rehefa misy onja mahery ao Patong, mpizahatany mandehandeha eto mba hilentika rano mitady rano milamina mba "hilomano".
Vidiny ao amin'ny Tri Trang Beach (Aogositra 2019)
Tri Trang Beach Photo
Fahalalahana amoron-dranomasina (morontsiraka malalaka). Freedom Beach.
Freedom Beach na Freedom Beach, izay ekena ho iray amin'ny torapasika tsara tarehy indrindra any Phuket. Somary tsy azo ekena ary aloa ny fidirana mankany aminy, saingy tsy manakana mpizahatany io ary lasa malaza kokoa ity tora-pasika ity. Ary raha dimy taona lasa izay dia efa saika toy ny zavamaniry izy io, ankehitriny dia lemaka be sy malaza ary misy fotodrafitrasa efa misy.
Io amoron-dranomasina io dia ao amin'ny tampon-dranony keliny izay atsimo amin'ny Patong Beach.
Azonao idirana amin'ny ranomasina sy ny tany izany.
Vidin-javatra. Ahoana no hahatongavana any
Amin'ny ranomasina dia afaka miainga avy any amoron-dranomasin'i Patong sy Karon ianao. Ny sambo iray dia mitentina baht 1500-2000 ho an'ny sambo iray feno (hatramin'ny olona 10) mandritra ny dia iray. Aza hadino ny handrindra ny fotoan'ny dia fiverenana ary tadidio ny isan'ny sambo :).
Ny sasany dia mandeha manao sambo manidina amin'ny morontsiraka akaiky indrindra.
Amin'ny alàlan'ny tanety dia afaka tonga amin'ny Freedom Beach ianao amin'ny tuk-tuk avy any Patong mandritra ny 250-400 baht.
Azonao atao ny mampiasa ny fitateranao manokana, fa aorian'izay dia tsara kokoa ny mampiasa ny navigateur. Ao amin'ny sarintany Google iray ihany, lalana iray aorina eto tsy misy olana. Fametrahana fiara ho an'ny bisikileta amoron-dranomasina dia, ary tena mahazo aina.
Eo ihany koa ny birao tapakila. Ny fidirana amoron-dranomasina dia 200 baht isaky ny olona. (2019). Misy koa ny magazay kely izay ahafahanao mividy rano, voankazo ary zavatra kely mety hohanina.
Dia tsotra daholo ny zava-drehetra. Hisy midina any amoron-dranomasina. Somary sivily izy - eo amin'ny dingana. Fa ho an'ny gourmets dia misy làlana mamakivaky ny ala alaala, fa kosa tokony marihina fa raha tonga avy any Patong ianao dia hijanona eny an-dalana ny biraon'ny tapakila ary handoa ny fidirana ianao.
Ahoana ny fomba hidiran'ny Freedom Beach maimaimpoana.
Tsotra ny zava-drehetra eto. Ny fidirana amin'ny fomba ofisialy amin'ny moron-dranomasina ity dia avy amin'ny Pantai Pantai Karon. (Natao andoa tao koa io.
Saingy tsy azo atao ny manefa amin'ny fomba ofisialy ny saram-pidirana ao Thailand, avy ao Patong, raha mandalo ianao dia aloa vola "tsy misy fepetra" amin'ny fandalovan'ny faritany manokana. Karon, tsy misy faritany toy izany.
Eny, tonga maimaimpoana ireo tonga nandalo rano. Nidina ho an'ny fitaterana ihany izy ireo.
Beach Beach, fotodrafitrasa, fepetra
Kely ny tora-pasika. Mahatratra hatramin'ny 500 metatra. Maivana ny fasika eny, saika fotsy. Kely sy mahafinaritra ny fikasihana. Maloto, tsy misy vato sy fanala hafa. Madio ny rano eo amoron-dranomasina. Tsy mahery ny onja. Ny fidirana amin'ny rano dia miso, ny ambany aza.
Hita mibaribary ny fisehoan-drano eo amoron-dranomasina ity, ary ela dia ho lasa any amin'ny lalina.
Tsy misy mpiambina amin'ny moron-dranomasina e! Ataovy ao an-tsaina izany!
Filofosaky ny masoandro, ny masoandro (120 baht), elo, trano fidiovana. Eto daholo izany, ary ny vola rehetra. Ny alokaloka voajanahary koa be dia be. Ny moron-dranomasina dia voahodidin'ny ala mikitroka.
Aza adino fa tsy misy makana eto amin'ity torapasika ity!
Misy famantarana momba ny fandrarana ny mitondra ny sakafony sy ny zava-pisotro any amoron-dranomasina. Fa ity dia resaka feon'ny fieritreretana - tsy misy mijery ny harona.
Amin'ny ankapobeny .. tsara ny morontsiraka. Betsaka no tonga eto noho ireo sary azo tantaram-pitiavana.
Address: Pa Tong, Distrika Kathu, Phuket 83100, Thailand
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://g.page/weddinginphuket?share
Sarin'ny Beach amin'ny fahafahana
Ranomasina Ya Nui Overview
Izy io dia torapasika kely, ny halavan'ny izay tsy mihoatra ny ampolony metatra. Na izany aza, misy serivisy kayak sy cafe misy serivisy eto. Ary amin'ny ankapobeny, io torapasika io dia tsy misy fahafinaretana.
Miorina tsara eo anelanelan'ny Promtep Cape sy ny efitrano fanaraha-maso miaraka amin'ny rivo-piainana Windmill View Point. Ary azo jerena eny an-dalana mankany Nai Harn Beach izy.
Izy io dia malaza indrindra eo amin'ireo tia ny fotsy hoditra, satria misy rano madio, vato mahafinaritra sy tontolo manankarena. Fa tsy dia mahaliana loatra ity toerana ity ho an'ireo tia ny fialantsasatra amoron-dranomasina.
Amin'ny vanim-potoana ambony, matetika dia feno olona io torapasika io.
Ny fasika eto dia tsy madio. Fa ny rano eto dia mazava. Malemy fanahy ny fidirana amin'ny rano, fa ny ambany tsy voakitika noho ny habetsahan'ny vato maranitra sy ny faty maty. Marina indrindra izany amin'ny lafiny havanana amin'ny tora-pasika.
Ny fotodrafitrasa amin'ity torapasika ity dia azo ekena tanteraka. Rehefa miditra amin'ny aloky ny hazo rofia dia misy fiantsinana tsara ho an'ny fiara sy bisikileta. eny amoron-dranomasina dia misy fanofaanana kayaks, fitaovana ho an'ny snorkeling tsotra, seza famaomana ahofa. Misy trano fidiovana sy dobo vaovao koa. Eo afovoan-dàlana avy any amoron-dranomasina dia misy kafe tsara roa. Matetika ny vidiny. Ny iray tamin'izy ireo aza dia nivarotra kvass, araka ny porofon'ny takelaka miteny Rosiana.
Vidin'ny tora-pasika (2019)
Elo satroka + 100 baht
Kayaks - 200 baht isan'ora (indroa)
Saron-tava sy fantsom-borona - 100 baht
Shower - 20 baht
Ny hano miaraka amin'ity tora-pasika ity dia mihidy amin'ny andaniny sy ny fidirana amin'ny rano dia tena malefaka, ary noho ireo antony ireo, mafana ny rano eto. Angamba izany no antony tian'izy ireo nitsidika ity torapasika ity miaraka amin'ny zanany. Na ny mpizahatany na ny mpizahatany. Ny tora-pasika ihany koa dia mirehareha fotoana hahafahana maka sary vitsivitsy manintona.
Manjary malaza eo amin'ireo mpizahatany miteny Rosiana ny tora-pasika.
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/L67Kd1jyZsXym27f6
Sarin'i Ya Nui Beach
Ao Sein Beach Photo
Ny tena mahaliana amin'ny Phuket!
Sary avy amin'ny Bangla Road
Azo heverina fa tsy hahatonga fahavitrihana ho an'ny mpandeha mandehandeha ity ranomasina ity. Ireo izay tsy mbola nitsidika fotaka Aquarium ho an'ny daholobe dia nanoro hevitra mafy ny handeha eto. Misy tranga mahaliana.
Azo antoka ny fahatsapana!
Sarin'ny aquarium ao amin'ny phuket
Aquarium vaovao nosokatra tamin'ny tapaky ny taona (2019) tao amin'ny toeram-pivarotana «Central Phuket Floresta". Ao amin'ny tany B1 no misy azy. Avy eo amin'ny fidirana dia midina amin'ilay escalator isika ary manaraka ny famantarana. Tsy azo atao ny ho very.
Ny Ranomasimbe-nosy dia toerana misy ny lehibe indrindra any Thailand, saingy tiako ny milaza fa tsy dia lehibe loatra toy ny malalaka be.
Amin'ity sehatra ity (Desambra 2019), madio daholo ny zava-drehetra, madio, vaovao eto. Ny ranomasimbe-dranomasina dia mizara ho faritra zéro isan-karazany.
Misy, ohatra, faritra iray misy vovo-doko (vatohara), misy faritra ifandraisana izay ahafahana hikasika ny mponina ao anaty ranomasina lalina, toy ny cubs shark, taratra kely, kintana ranomasina ary ny hafa.
Misy faritra misy otters, miaraka amin'ny jellyfish, miaraka amin'ny antsantsa ary zavatra mahaliana hafa.
Misy kafe koa misy vidiny mahazatra sy trano fisakafoanana avo lenta izay misy ny vidiny manomboka amin'ny 2600 ka hatramin'ny 4000 baht isaky ny sakafo napetraka.
Vidin'ny fitsidihana ny Aquaria Phuket Thailand Aquarium sy ny Mozean'ny optical illusion (AR Trickeye Museum Phuket)
Ny vidin'ny tapakilan'ny ankizy (manomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 11 taona) - 450 baht
fampisehoana fandaharam-potoana ao amin'ny Oceanarium:
11: 00 Giant Amazonia Toerana: Mystic Florest
11: 30 Toerana misy azy: Renirano renirano
11: 45 Toerana shark alley: Coastal Sky
12: 00 Toerana Penguins: Coastal Sky
12: 15 Stingray Bay Toerana: Stingray Bay
12: 30 Ny toerana misy ny ranomasina: South China Sea
14: 00 Giant Amazonia Toerana: Mystic Florest
14: 15 Toerana misy azy: Renirano renirano
14: 30 Toerana shark alley: Coastal Sky
14: 45 Toerana Penguins: Coastal Sky
15: 00 Aseho momba ny tsipika ny toerana misy ny ranomasina: South China Sea
15: 30 Stingray Bay Toerana: Stingray Bay
16: 00 Ny toerana misy ny ranomasina: South China Sea
Manana adiresy iray izy ireo: Vichitsongkram Rd, Wichit, Muang, Phuket 830. Ity no fivarotana "Central Phuket Floresta »
SEC Central Phuket Floresta (Aquarium amin'ny tany B1)
Sarin'ny Aquarium vaovao (Aquaria) ao Phuket
Misy zaridaina orkide, 20 ara-pinoana - samy hafa zaridaina, hazo fihinam-boa, ala kely ny hazo palmie, zaridaina kactus, kamory miaraka amin'ny felam-boninkazo, zaridaina kactus, zaridaina Japoney, anglisy ary hafa ...
Site ofisialy https://www.phuketbotanicgarden.com/
Saripika avy amin'ny Botanical Garden any Phuket
An'ity manokana ity kianja ity. Mirefy 12 hektara ny faritra misy azy, 1 mahery ny karazam-borona hafa 000 miaina monina ao. Nisy avy tany Azia, Afrika, Amerika. Ireo mpitsidika dia avela hamahana ny vorona (fa isaky ny 100 baht no arahana an'io), ary misy koa ny vorona. Ho an'ny vorona, ny voay koa mipetraka ao amin'ny zaridaina, ary avela ihany koa izy ireo no mamelona. Ity dia toerana mahaliana, indrindra ho an'ny ankizy, ary ireo tia biby ary indrindra tsy mankahawa ny vorona.
Sarin'ny Phuket Bird Park
Ny valan-javaboary vorona ao amin'ny Paradise Paradise
Ao Phuket dia misy zaridaina vorona hafa, izay eo amin'ilay tendrombohitra mitovy amin'ilay Big Buddha.
Izy ireo koa dia mitazona fampisehoana miaraka amin'ny vorona. Amin'ireo seho ireo dia afaka mandray anjara ihany ny mpijery ary afaka manandrana miresaka amin'ny boloky eo an-toerana ianao. Ity dia toerana mahaliana hitsidika miaraka amin'ny ankizy.
Ny tombony azon'ny Bird Paradise noho ny valan-jorona iray hafa ao Phuket dia ny fampisehoana fampisehoana voalohany dia atao adiny iray. Eo amin'ny faritry ny Valan-javaboarin'ny Vorona ihany koa dia lakana kely misy zanak'ondry.
Tsiahivina ny hametraka amin'ny ora iray sy sasany ka hatramin'ny adiny roa hitsidika an'io kianja io.
Ny Paradise Paradise dia miasa isan'andro from 10 to 17
Manomboka isaky ny ora ny fampisehoana vorona
Fohy ilay vorona, fa mamela fahatsapana mazava tsara. Indrindra ho an'ny ankizy.
Vidiny ao amin'ny zaridainam-borona
Tapakila ho an'ny olon-dehibe sy ho an'ny ankizy 12 taona 500 baht
Ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona 300 baht.
Ity zaridainam-panjakana ity dia mipetraka akaikin'ny lalana mankany amin'ny Big Buddha. Afaka tonga eto ianao amin'ny fiarakaretsaka, amin'ny bisikileta / fiara na mandritra ny fitsidihana.
Address: 82/4 Soi Yot Sane 1, Chalong, Distrika Mueang Phuket, Phuket 83100, Thailand
telefaonina: + 66 64 026 5482
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/iBvJGeKHfGPmQipm9
Paradisa vorona ao Phuket
Park Phuket FantaSea, (Phuket FantaSea). Overview
Ranomasina Fantasy dia kompania fialamboly lehibe. Afaka ambara isika fa Phuket FenteSi Park dia tanàna iray manontolo izay misy ny fombany, ny tantara ary ny kolontsaina.
Aty hariva dia mandamina hetsika mazava izy ireo. Phuket Fenteci dia mahasarika goavana, izay misy ny lalao isan-karazany, ny carousels, ny magazay.
Ny velaran'ny velarantany dia 57 ha, ary mizara ho ampahany 3. Ny voalohany amin'ireo zona ireo dia ny toerana hanaovana fampisehoana marevaka mandritra ny antsasaky ny ora, hetsika an-tsehatra ho an'ny ankizy sy ny lehibe, ny fety ary ny fampisehoana an-tsary. Ao amin'ny faritra faha-2 dia misy ny trano fisakafoanana Golden Kinnari, ary ny faritra faha-3 no antsoina hoe. "Lapan'ny elefanta."
Amin'ny ankapobeny, Phuket Fenteci dia mitovitovy amin'ny Disneyland, fa amin'ny tsirony Thai, satria feno ny zava-drehetra amin'ny kolontsaina nasionaly an'ny mponin'i Thailand.
Mba hahitana amin'ny fomba mazava ny fampisehoana samihafa atao eto dia tsara kokoa ny mividy tapakila tapakila amin'ny toerana "volamena". Ny fampifangaroana ny fampisehoana teatra sy ny boribory dia tena mahavariana ary manaitra miaraka amin'ireo mpilalao sarimihetsika be dia be nataony ary ireo mpilalao sarimihetsika. Amin'ny fampisehoana sasany eo amin'ny sehatra dia misy elefanta 18 amin'ny fotoana mitovy!
Ny fampisehoana dia tsy manam-paharoa sy maro loko. Nampiasa pyrotechnics maro loko, akanjo marevaka.
Ny maka sary na ny sary mihetsika dia tsy voarara.
Amin'ny fidirana dia hangatahana handefa amin'ny telefaona ianao, izay hiverina avy eo amin'ny faran'ny fampisehoana.
Amidy any ny serivisy, fa ny vidiny kosa lafo be.
Misokatra ny kianja manomboka amin'ny 17:30 ka hatramin'ny 23:30
Andro tsy fiasana - Alakamisy.
Vidiny ao amin'ny ranomasina Fantasy:
Tapakila anisan'izany ny fampisehoana sy ny kodiarana: ho an'ny olon-dehibe - 2200 baht, ho an'ny ankizy - 2000 baht.
Ahitana fampisehoana ihany - 1800 baht.
Fividianana amin'ny fitsidihana trano fisakafoanana trondro - 1100 baht.
Fividianana ny toerana "volamena" - 300 baht.
Famindrana (lalana mankany amin'ny zaridainam-panjakana na aiza na aiza any Phuket ary miverina) 300 baht.
Afaka mandeha amin'ny elefanta ianao 1100 baht
Famonoana elefanta 80 baht
Ny tapakila dia azo vidina ao amin'ny zaridainan'ny tenany ary eo am-barotra amidy amin'ny fitsangantsanganana isan-karazany, izay ao Phuket isaky ny dingana.
Aiza no misy ny Fantasy Park ary ny fomba hahatongavana amin'izany
Ity toerana ity dia hita eo akaikiny Kamala Beach. Afaka tonga eto ianao avy any amin'ny faritra hafa Phuket amin'ny fiarakaretsaka na bisikileta / manofa trano, na izany aza dia mahasoa kokoa ny mampiasa famindrana avy amin'ny zaridainan'ny tenany.
Address: 99 Kamala, Distrika Kathu, Phuket 83150, Thailand
telefaonina: + 66 76 385 000
Site ofisialy http://www.phuket-fantasea.com
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://g.page/PhuketFantaSea?share
Saripika avy amin'ny FanataSi Park (Fantasy) ao Phuket
Orchid Farm (Phuket Orchid Farm), Phuket. Overview
Ireo mpankafy orkide sy voninkazo hafa firenena hafa dia mety tiana eto!
Voalaza fa maherin'ny 1 ny karazana orkide angonina amin'ity endrika ity, saingy raha miditra sy aseho izy ireo dia kely kokoa izy ireo.
Ny mpitsidika dia afaka mianatra mamelona azy ireo, mividy zana-kazo sy boky momba ny fambolena ireo voninkazo ireo.
Fa ny olona tsy manana fihetseham-po betsaka amin'ny voninkazo, dia mety hanadino ny toeram-pambolena orkide, indrindra satria ny vidin'ny fidirana dia mazava loatra. Raha ny marina, tsy valan-javaboary na zaridaina ity izany fa tena toeram-pambolena tena izy, ka tsy ho afaka hahita be ianao eto ary tsy manenjika ny voninkazo voarindrao.
Betsaka ny orkide, saingy tsy dia mahita tsara ianao.
Kely eto ny isan-karazany:
Vandas amin'ny loko samihafa - misy ny ankamaroany, dendrobium, Cattleya, Lelia, Leliocattle, vitsivitsy Phalaenopsis sy vanila, Oncidium, stangopei goavana. Ary koa neoregelia lehibe, vitsivitsy cryptanthus, xanadu philodendrons, andré anthuriums.
Ny tsy ampy amin'ity toeram-pambolena ity dia ny takelaka fototra miaraka amin'ny anaran'ny karazana orkide.
Ora fanokafana sy vidiny
Misokatra fito andro isan-kerinandro ny toeram-pambolena. manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 17:30.
Vidim-bokatra orkidra (12.2019g)
Ny vidin'ny tapakila olon-dehibe 400 THB
Ankizy - 200 baht.
Eo amin'ny fidirana dia homena fehezam-boninkazo kely ny tovovavy
Ho an'ny fanamarihana vidiny, orkidin'ny olon-dehibe saika misy karazana azo amidy eto 500-700 baht.
Ary eny! Manana gilasy tena mahafinaritra izy ireo amidy.
. Mitentina 100 baht, saingy lasa matsiro io.
Azonao atao koa ny mividy podka amin'ny orkide vanille. Ny sandan'ny 180 baht. Eto ianao dia afaka mividy otrikaina isan-karazany alaina ho sakafo. Voahaja ao izy ity.
Afaka mandeha amin'ny toeram-piompiana orkide ianao amin'ny fiarakaretsaka na manofa bisikileta / fiara. Tsy mandeha eto ny fitateram-bahoaka. Ary raha mitondra fiara ianao, dia ho azonao antoka fa ampiasao ilay navigateur. Mihodina ny lalana.
Amin'ny ankapobeny, ho an'ireo tia ny voninkazo mahaliana sy orkide indrindra, ny toeram-pambolena dia azo antoka fa tsy maintsy tsidihina.
Nasaina hitsidika amin'ny fararano izy io. Amin'ity vanim-potoana ity, saika ny zava-drehetra dia afaka mamony ao.
Aiza no misy azy. Antsipiriany momba ny fifandraisana
Address: 67/1 หมู่ ท่ 1 Soi Suksan 1, Rawai, อำเภอ เมือง ภูเก็ต Phuket 83130, Thailand
+ 66 81 891 9173
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/tax3UbvzzQEFp9nB6
Saripika avy amin'ny Phuket Orchid Farm
Mozean'ny optical illusion (Tranon-tsokazo Phuket Trick maso). Overview
Ao amin'ity tranom-bakoka ity dia misy sary hosodoko maro amin'ny endrika 3D, izay akaikin'izany dia azo atao ny maka sary amin'ny fomba toy ny hoe tena eo amin'ny toerana aseho amin'ny sary ianao.
Tsy misy na inona na inona fiaviany manokana na fampahalalana an'ity, na izany aza, ireo izay mbola tsy nankany amin'ny toerana toy izany, dia azo antoka fa ho tia izany.
Ny mpiasa dia manampy amin'ny fakana sary. Soso-kevitra ny zoro tsara indrindra sy ny halavirana, sary. Amin'ny ankapobeny, manandrana miasa tanteraka ny vidin'ny tapakila fidirana tanteraka izy!
Ny fidirana amin'ny tranom-bakoka dia tsy mitondra akanjo. Eo amin'ny fidirana dia amboarina anaty kitapo ny kiraronao, nesorina izy ireo ary misy isa no namoaka, arak'izay handanjanao ny kiraronao amin'ny fivoahana.
Nasaina handany farafahakeliny mandritra ny adiny maromaro hitsidika ity tranom-bakoka ity. Zary fampirantiana zato mahery, ary takiana ny tranom-bakoka, indrindra amin'ny vanim-potoana ambony, izay midika fa any an-toeran-kafa dia mila miandry ianao mandra-pahafahan'ny olon-kafa miala amin'ny banga.
Ora fisokafan'ny tranombakoka ary vidiny
Misokatra fito andro isan-kerinandro ny tranom-bakoka. from 10 to 19
Na dia avela hiditra eo amin'ny fidirana aza ho 18.
Nasaina handany farafahakeliny mandritra ny adiny maromaro hitsidika ity tranombakoka ity
Vidiny ao amin'ny Museum of the optical illusion
Tapakila ho an'ny olon-dehibe sy ho an'ny ankizy avy amin'ny 1,3 m mendrika 500 THB
Ho an'ny ankizy fohy kokoa 1,3 m - 270 baht. (Fahalavoana 2019)
Ity tranom-bakoka ity dia hita ao amin'ny afovoan-tanànan'i Phuket amin'ny làlan-kalehany lehibe, izay antsoina hoe Lalana Phang Nga. Avy amin'ny morontsiraka lehibe indrindra amin'ny nosy dia afaka tonga eto amin'ny tuk-tuk ianao. Afaka tonga amin'ny anao manokana avy amin'ny Kata Beach ianao raha mandeha bisy 40 baht, mankany amin'ny peratra any Phuket Town, akaikin'ny fijanonana farany, dia mandeha mandeha mandritra ny 10 minitra na haka taxi 20 Baht.
Eny, na mampiasa bisikileta na manofa.
Fifandraisana amin'ny tranombakoka
Address: 130/1 Phangnga Rd, Talat Yai, Distrika Mueang Phuket, Phuket 83000, Thailand
telefaonina: + 66 76 212 806
Site ofisialy http://www.phukettrickeyemuseum.com/index.php/en/
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/X4Gt3euhRB8dEbq88
Sary avy amin'ny Museum Phuket of optical illusion
Museum "Thai Hua" (Museum Thai Thai). Overview
Ity tranom-bakoka ity dia hita ao amin'ny afovoan-tanànan'i Phuket afovoany any Chinatown, ao amin'ny trano tsara tarehy iray namboarina tamin'ny endrika maritrano volopeana Eoropeana sahabo ho 100 taona lasa izay.
Tamin'ny sekoly voalohany, sekoly sinoa no niasa tamin'ity tranobe ity. Afaka mahita fampiratiana iray natokana ho an'ny tantaran'ny sinoa Phuket Shinoa ianao izao. Arakaraka, arakaraka ny tantaran'ny diaspora shinoa no jerena manokana.
Ny ampahan'ity tranobe ity dia mitazona ny endriny hatrany am-pianarana.
Ny Museum Thai Hua dia afaka manintona olona rehetra izay manana fahalianana kely amin'ny tantara.
Eny, amin'ny fotoana iray, tena tiana ny fahalalana ny sinoa na Thai. Satria ny fampirantiana ny ankamaroany dia tsy fampirantiana fa mijoro amin'ny soratra amin'ireo fiteny etsy ambony.
Ora fiasana tranom-bakoka
Misokatra fito andro isan-kerinandro ny tranom-bakoka. from 9 to 17
Ny varotra tapakila - hatramin'ny 16.
Ny vidin'ny tranombakoka
Eto ny fidirana. 200 THB
Ny zo haka sary dia mendrika 200 baht. Saingy tsy misy zavatra manokana hakana sary ho azy.
Ahoana no hidirana amin'ny tranom-bakoka. Fampahalalana mifandray
Thai Hua dia hita ao: Tanànan'i Phuket, st. Lalana Krabi, 28 taona. Azo atao fa mandeha an-tongotra eto amin'ny fiantsonana minibus ao afovoan-tanànan'i Phuket.
telefaonina: + 66 76 211 224
Site ofisialy http://thaihuamuseum.com/
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/4suUFJh9BwYvq2bn8
Sary avy amin'ny Museum Museum Tai Hua
Thalang Museum (Tranom-pirenena Thalang National). Overview
Ity tranom-bakoka ity dia noforonina tamin'ny taona 1985, ny zanakavavin'ny Thailandey Maha Chakri Sirindhorn. Asongadiny koa ny tantara sy ny maoderina nataon'i Phuket.
Ny tranombakoka dia mizara ho efitrano 6 amin'ny foto-kevitra sy foto-tantara.
Ny efitrano fandraisam-bahiny dia natokana ho an'ny tantara Thai amin'ny ankapobeny, manomboka amin'ny vanim-potoana praseiste ka hatramin'ny ankehitriny.
Ny galera voalohany dia milaza ny momba ireo mponina voalohany tao amin'ilay nosy, ary koa ny momba ny harena voajanahary.
Ny lohahevitry ny galeriana faharoa dia ny ady atrehan'ireo Thais amin'ireo mpanafika avy any Burma ao Talang.
Ny galera fahatelo dia milaza ny momba ny mponina sinoa Phuket
Ny fahefatra dia mikasika ireo vondron'olona hafa ao amin'ny nosy.
Any ivelan'ny trano ihany, eo akaikin'ny arabe dia misy fampandrenesana milaza ny tsunami nitranga tamin'ny 2004. Avy any ivelany, toa ny fanariana fako ihany koa. Na izany aza dia io indrindra ny fomba nanandraman'izy ireo namerina ny vokatr'ilay tsunami.
Ny tranombakoka azo antsoina hoe mahaliana, ny fampirantiana dia miaraka amin'ny soratra amin'ny antsipirihany amin'ny teny anglisy, ary isaky ny tapakila dia mahazo drafitra amin'ny musium ny mpitsidika.
Na izany aza, mbola kely ny tranobe Talang, ny zavatra rehetra dia azo hodinihina ao anatin'ny 30 minitra. Mampalahelo fa voarara ny maka sary ao anatiny.
Misokatra ny Alarobia Toby ka hatramin'ny alahady
from 9 to 16.
Ny faran'ny herinandro, afa-tsy ny alatsinainy sy talata, no fetim-pirenena Thailand.
Ny tapakila iray dia mendrika ny zavatra rehetra 100 baht.
Aiza sy ny fomba hahatongavana any. Antsipiriany momba ny fifandraisana
Ity tranom-bakoka ity dia ao amin'ny foibe Phuket. Izy io dia nesorina lavitra tamin'ny tora-pasika malaza indrindra sy ny tanàna Phuket.
Afaka mandeha eto ianao amin'ny fiarakaretsaka na fiara / bisikileta manofa.
Address: 217 Si Sunthon, Distrikan Thalang, Phuket 83110, Thailandy
Tranonkala - https://www.facebook.com/ThalangNationalMuseum
telefaonina: + 66 76 379 897
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/7XPHwCapSavBgGY4A
Saripika avy amin'ny Museum Thalang any Phuket
Museum an'ny ranomasina Shell (tranombakoka ranomasina any Phuket), Famintinana
Ao amin'ity tranombakoka ity dia ahitanao famoriam-bola mahavariana karazan-tatatra isan-karazany. Ny iray amin'ireo akorandriaka dia milanja 500 kg; ny sasany amin'ireo zavakanto tranainy indrindra dia efa an-tapitrisany taona.
Raha ny filazan'ny tompon'ny tranombakoka dia nahavita nanangona akorandriaka lehibe indrindra tany amin'ny faritra Azia atsimo atsinanana izy ireo.
Amin'ny fitambarany, ny tranombakoka dia manana fampirantiana mihoatra ny 20!
Mametraka fihetseham-po mafy amin'ny ankamaroan'ny mpitsidika ny tranombakoka, na dia tsy liana amin'ny akorandriaka aza! Fa ny fampirantiana dia efa an-tapitrisany taona, na milanja kilaometatra an-jatony na mijery hafahafa ka tsy avelany hisy olona tsy hiraharaha.
Tena mendrika tokoa ny famoriam-bola eto.
Any amin'ny tany, misy ny fivarotana fanomezana, izay manana karazana akorandriaka an-dranomasina amidy. Marina fa ny vidiny eto dia avo roa heny sy tapany in-droa, raha ampitahaina amin'ireo magazay mahazatra amin'ny nosy. Fa ny assortment eto dia lehibe noho ny fivarotana mahazatra.
Misokatra fito andro isan-kerinandro ny Museum Museum
avy amin'ny 8 ny maraina mankany 19 amin'ny hariva
Vidiny tapakila ho an'ny olon-dehibe - 200 THB
Ho an'ny ankizy - 100 baht.
Ity tranom-bakoka ity dia hita eo akaikin'ny làlan-java-miorina amin'ny laharana faha-4024 ao amin'ny faritra atsimo-atsinanan'i Phuket. Azo atao amin'ny alàlan'ny fiarakaretsaka na fiara manofa mpandeha /.
Avy amin'ny afovoan-tanànan'ny Phuket Town, fiara fitateram-bahoaka an-dàlambe, izay lafo 40 baht (ny faritry ny làlana dia ny Rawai).
telefaonina: + 66 76 613 777
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/tkFWpnZ537X3uov98
Sary avy amin'ny Museum Phuket Sea Shell
Museum Fambolena ao Phuket (Kathu Museum Museum). Overview
Ity tranom-bakoka ity dia natokana ho an'ny fitrandrahana any Phuket.
Ny mineraly tena lehibe eto dia ny voanio. Indray mandeha, nanankarena tamin'ny tongolo i Phuket, izay nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny tantaran'ny nosy, hatramin'ny nitakiana io vy io.
Fantatry ny fampandrenesana ny fampandrenesana ny olona iray dia azo antoka fa tsy hisy vahoaka manankarena sy tantara manankarena toy izany raha tsy misy masika ity nosy ity.
! Nosokafana ilay tranombakoka tao amin'ilay toerana nisy ny toeram-pitrandrahana, efa reraka ankehitriny.
Ity mine ity dia ampahany amin'ny fampandrenesana ny tranombakoka. Misy fampirantiana mampisaraka, toy ny vola madinika sy fitaovana, ary koa ny seho izay mamolavola ny fitrandrahana sy ny fiainana andavanandro any Phuket.
Eny an-dalambe eo akaikin'ny tranom-bakoka dia misy ireo fitaovana namboarina ho an'ny fitrandrahana.
Ny tranombakoka, dia mety hisy hilaza hoe, "ho an'ny mpankafy", mazava be fa tsy dia mifanipaka amin'ny fiteny anglisy. Fa na dia ny mijery fotsiny aza dia mety mahaliana ireo tia ny tantara sy ny teknolojia.
Tranombakoka "tena" ity! Lehibe, misy efitrano sy fanararaotana marobe.
Ary ao akaikin'ny tranombakoka dia misy zaridaina mahafinaritra.
Miasa tontolo andro afa-tsy izy Alahady,
Misokatra amin'ny 8 ka hatramin'ny 16.
Tapakila olon-dehibe 100 THB
Tickets an'ny ankizy - 50 baht.
Aiza ny tranombakoka misy
Ity tranom-bakoka ity dia ao amin'ny foibe Phuket. Lavitra lavitra ny zava-dehibe ifantohan'ny nosy, izay angamba izy io matetika tsy feno olona. Azo atao tsara ny manatona azy irery amin'ny bisikileta na fiara nohofana na amin'ny fiarakaretsaka. Tsy mandeha eto ny fitateram-bahoaka.
Fifandraisana amin'ny tranombakoka. Address. Manondro ny sarintany
Address: Moo 5, Lalana Khatu-Nakoh, Tambon Khatu, Amphoe Khatu, Phuket, 83120, 83120, Thailandy
telefaonina: + 66 81 535 3187
Site ofisialy http://www.kathucity.go.th
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/J6Bw8F3JxVYHMN9w9
Saripika avy amin'ny Museum Museum Phuket
Big Buddha ao Phuket (Bouddha be). Overview
Ny sarivongana mahafinaritra an'ny Big Buddha, izay hita eny an-tendrombohitra dia hita be dia be avy aiza. Ny fahatsapana dia tena mamokatra mahery sy mamirapiratra ary be voninahitra!
Ary ny Bouddha mihitsy dia mijery hafaliana tokoa, izay manampy trotraka ihany koa ny fihetseham-po!
Eo am-pototry ny sarivongana ny fidirana mankamin'ny tempolin'ny anarana mitovy.
Ny tempoly sy ny sarivongan'i Big Buddha dia mijoro ao an-tendrombohitra Naka Kerd, 370 m ny haavony: miakatra eo atsimon'i Phuket ity tendrombohitra ity.
Ity tsangambato ity dia natsangana vao haingana (nanomboka ny fananganana tamin'ny 2002) ary mbola eo am-pamitana.
Na izany aza, efa mahazo alàlana eto ny mpizahatany, ary maro amin’izy ireo. Amin'izao vanim-potoana izao (Novambra 2019) dia eo am-pivoriana ny asa, ary misy ala ala ao. Fa ny mpizahatany mbola navela hiditra. Ary efa vita eto ivelany ny sarivongana.
Big Buddha dia manana ny haavony 45 m ary hita mazava avy amin'ny morontsiraka atsimo Phuket. Manodidina ny tranokala noforonina, izay ahitana an'i Phuket manontolo dia hita ny mari-pahaizana 360 degre.
Ny sarivongana dia mahavariana amin'ny habeny, saingy mitombina tsara ny mankatona azy rehefa tsy mazava tsara ny andro. Amin'ny fotoana tahaka izany dia hita miharihary ihany koa ireo nosy hafa izay akaikin'ny Phuket.
Ity dia iray amin'ireo toerana mahaliana indrindra ao Phuket, misy olona marobe eto amin'ny tolakandro, ny mpizahatany avy any amin'ny tany rehetra dia miaraka amin'ny fitsangatsanganana feno mpandeha. Noho izany, raha liana amin'ny sary tsy misy olon-tsy fantatra ao aminy ianao, dia tsidihina ny hitsidika ilay Big Buddha manomboka maraina ka hatramin'ny aloha, na, mifanipaka amin'ny masoandro mody.
Eny an-dàlana mankany amin'ny Big Buddha dia misy kafe sy trano fisakafoanana marobe, izay manolotra fomba fijery mahafinaritra ao Phuket ihany koa. Ary eo an-dàlana dia hisy arifaritra maromaro miaraka amin'ireo elefanta izay ahafahanao maka sary na omenao fotsiny izy ireo100 baht, izany sary, famahanana).
Hotely iray hamboarina eo akaikin'ny tempoly, ary amin'ny ankapobeny manodidina ny tempoly dia misy zavatra maro be avy amin'ny toeram-panorenana - fitaovam-panorenana, ala ary maro hafa.
Ny Mpanjakan'i Thailand dia te-hanao an'i Big Buddha sy ny tempoly ao ambanin'izany toerana toerana fivahiniana masina izany!
Tempolin'i Big Buddha
Misokatra ho an'ny besinimaro i Temple sy Buddha ежедневно from 6 to 19.
Andrasana ny hitsidika ny Big Buddha sy ny tempoly mandritra ny ora roa.
Dia aiza ny mandeha tongotra, ary misy aiza sy inona no maka sary.
Tsy ilaina ny mandoa vola eto @ parking ary malalaka ny parking
Ny fandraisana sy ny fisaorana dia azo ekena tsara eto.
Manakaiky ny tohatra ao amin'ny tempoly, eo ambanin'ny lakolosy misy sarivongana, ny moanina bodista iray dia tsy maintsy mamatotra tady eny an-tanany ho an'ireo maniry hitsangana ho an'ny sarivongana: lehilahy eo amin'ny ankavanana, vehivavy eo amin'ny ankavia. Ireo tady ireo, araka ny fampahalalana azo jerena ampahibemaso, dia tondroin'ireo izay mitondra azy ireo amin'ny zavatra ratsy rehetra.
Ho fankasitrahana izany, amin'ny maha-fitsipika azy, ny olona dia mamela fanomezana tony tsotra - 20-200 baht
Afaka tonga any an-tendrombohitra Naka Kerd ianao amin'ny alàlan'ny bisikileta / fiara manofa, taxi (avy amin'ny Karon Beach, ny taxi iray no handoa anao 500 baht)
Na mandritra ny fitsidihana.
Ny fihanihana ny tsangambato eny an-tendrombohitra dia mety, mora resahana na dia amin'ny bisikileta ambany aza, dia afaka tonga eto ianao amin'ny bisikileta manofa kanefa tsy misy olana.
Mihodina ny lalana mankany amin'ny tampony, miaraka amin'ny fihodinana misosa, ary miaraka amin'ny fiakaran'ny feo. Noho izany, raha mitazana bisikileta ianao, ary zara raha misy ny zavatra niainany, dia mitandrema tsara. Ankoatra izany, mpizahatany hafa tsy za-draharaha amin'ny bisikileta, ary koa ny fiara sy ny fiara fitaterana, mihazakazaka eny an-dalana.
Ao amin'ny tempoly dia misy fahafahana hividy souvenir voatokana. Mazava ho azy fa lafo kokoa noho ny tsy mitovy amin'izany.
Address: ยอด เขา นาค เกิด Karon, Distrika Mueang Phuket, Phuket 83100, Thailandy
telefaona - 081-891-3827
Site ofisialy http://www.mingmongkolphuket.com/
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://g.page/BigBuddhaPhuket?share
Sarin'i Big Buddha any Phuket
Ary hoy ry zareo, raha toa ianao ka mamihina ny vavon'ilay elefanta lehibe indrindra, dia ho tanteraka ny faniriana!
Ny lehibe indrindra sy marevaka sy tsara tarehy indrindra dia ny trano Chedi Phra Menaat. 60 metatra ny haavon'ity tranobe ity ary avela hiditra ao an-toeran-kafa izy io raha tsy manao kiraro ianao, raha tsy manao kiraro ianao, fa any amin'ny faritra sasany amin'ny hazavana mafana ny masoandro, mitandrema handoro ny tenanao :). Misy gorodona telo ilay tranobe, fomba fijery mahafinaritra izay saika mahatratra 360 degre manomboka any ambony.
ny relic an'ny tempolin'i Chalong dia ampahany amin'ny hômba amin'ny Bouddha, izay tamin'ny 1999 dia nomena an'i King I Thailand tamin'ny taona faha-72 taonany tamin'ny fitondram-panjakany Sri lanka
Site ofisialy https://www.wat-chalong-phuket.com/
Sary avy amin'ny Tempolin'i Chalong
Tempolin'i Wat Phra Thong (Wat Phra Thong). Overview
Ity tempoly ity dia antsoina koa hoe tempolin'ny Volavola Volamena.
Ity koa ny tranoben'ny tempoly lehibe iray any Phuket. Raha mitambatra, aorian'ny Tempolin'i Chalong, ity no fisintonana ara-panahy lehibe faharoa ao Phuket.
Noho ny faritra somary lehibe an'ny lapan'ny tempoly, izay an'i Wat Phra Tong, napetraka ny famantarana ao amin'ny faritany, ary misy drafitra amin'ny antsipiriany eo akaikin'ny fidirana, ny soratra izay, kosa, dia amin'ny fiteny Thai ihany no nosoratana. Raha atambatra, ny firafitr'ity zava-sarotra ity dia ahitana tempoly dimy, ary koa ny crematorium, efitrano fisakafoana ary ny tranon'ny moanina izay mipetraka eto ary mitarika asa fanompoana mahazatra.
Aza hadino fa ity dia tempoly miasa eo, izay midika fa tsy maintsy manaraka ny akanjo fitafy ianao. Ny vehivavy dia tsy maintsy rakotra soroka ary mandohalika lohalika. Ny lehilahy koa dia tsy tokony ho ao amin'ny shorts amoron-dranomasina sy T-shirt eto. Midira koa amin'ny fehibory tsy manao akanjo.
Tamin'ny taona 1909, ny King of Thailand tamin'izany fotoana izany, Rama VI, dia nitsidika teto, nanome ny tranobe maoderina indrindra amin'ny laoniny. Ny tranoben'ny tempoly dia natsangana tamin'ny 1750.
Tempolin'ny Buddha Buddha
Ity misy sarivongan'i Buddha vita amin'ny volamena. Ary ilay anarana hoe Wat Phra Tong mihitsy dia tsy nadika tsy nahy ho Tempolin'ny Volavola Volamena.
Ny sarivongana dia manana anarana Luang Poh Phra Tong ary mampiseho ny antsasaky ny vatana sy ny lohan'ny Buddha ihany. Izany hoe raha ny tena marina dia mamindra fo ity, izay misy refy lehibe.
Tantaran'ny buddha volamena
Nilaza ilay angano fa hitan'ny tantsaha eny an-toerana io sarivongana io, raha nalevina tamin'ny tany izy ary tsy nisy nahavita nihady azy tanteraka. Ary izay niezaka nanao an'io dia tratra tamin'ny andro ratsy avokoa izy rehetra. Vokatr'izany, ny tempoly dia naorina manodidina an'io ampahany tamin'ny sarivongana io, izay mbola nolavina ihany.
Manakaiky ny tempoly dia misy tsangambaton'omby iray ary mpiandry ondry izay voalaza fa izy no voalohany nahita sarivongana volamena nalevina, ary avy eo dia maty tampoka tamin'ny tazo izy.
Na izany na tsy izany, tsy manoro hevitra mikasika ny sarivongana izahay. Nandritra ny faminaniana efa taloha, dia tsy nitondra zava-tsoa ho an'ireo nikasika azy izy.
Misy fampahalalana tsy voamarina koa fa vita amin'ny volamena ny sarivongana, fa ny ivelany kosa rakotra tanimanga ary hosorohana loko volamena. Nitranga izany rehefa nanafika an'i Thailand ny fahavalon'i Burma, ary mba hiarovana ny sarivongana volamena amin'izy ireo dia rakotra tanimanga taninkazo izy io.
Aiza ny tempoly. Ahoana no hahatongavana any. Ny vidin'ny fitsidihana
Any amin'ny avaratry Phuket i Wat Phra Tong, izay tsy lavitra ny resa-malaza malaza amin'ity nosy ity.
Azo atao na aiza na aiza eto antoandro.
Tsy aleo ny fidirana.
Azo atao amin'ny alalàn'ny fiarakaretsaka na fiara manidina / fiara.
Amin'ny ankamaroan'ny fitsangatsanganana fitsangatsanganana ao Phuket, io tempoly io dia saika tafiditra tanteraka.
telefaonina: + 66 93 621 4687
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/2AfRcVrhhwV8SZ3AA
Sary avy amin'ny tempolin'i Wat Phra Tong
Tempolin'i Suwan Khiri Khet Temple. Overview
Ilay Tempolin'i Wat Suwan Khiri Khet dia hita eo akaikin'ny tora-pasika Karon ary iray amin'ireo zavatra manintona indrindra amin'ity faritra ity.
Miorina faritany midadasika izay ahitana tranobe isan-karazany, ao anatin'izany ny tempoly lehibe, ny tilikambo lakolosy sns. Ny zava-drehetra dia maro loko sy tsara tarehy, toy ny zava-drehetra ao Thailand.
Malalaka tanteraka ny fidirana amin'ny tempoly. Raha mikasa ny handeha any amin'ny tempoly ianao, dia tadidio fa mila esorina ny kiraronao.
Namboarina tamin'ny faran'ny taonjato faha-19. Fa tafaverina tamin'ny laoniny vao haingana ary manana endrika tsara tarehy. Drafitra tsara tarehy, loko marevaka sy manankarena ary volamena maro be.
Eo akaikin'ny fidirana dia misy sary sokitra maitso ahitàna sarina bibilava miambina ny tempoly.
Ireo bibilava miambina ny tempoly
Manankarena amin'ny haingo ny tempoly ary manana angovo mahafinaritra.
Manakaiky ny faritanin'ity tempoly ity dia misy tsenan'alina tsy misy sakafo, sakafo haingana, sakafo souvenir ary fitafiana Thai.
Ny fandaharam-potoana hiasana. vidin'ny
Ny maodelin'ny fampandehanana ny tempoliny (i.e. ny fotoana alefa hiditra ao) 7 a.m. hatramin'ny 5 p.m.
Tsena alina eo akaikin'ny tempoly dia miasa amin'ny talata sy zoma.
Ora amin'ny tsena manomboka amin'ny 16 ka hatramin'ny 22 h.
Fidirana mankamin'ny faritry ny tempoly, amin'ny tempoly sy ny tsena maimaim-poana.
Address: 1 Patak Rd, Karon, Distrika Mueang Phuket, Phuket 83100, Thailand
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/h1zuNPJifLvQfXXvv
Sary avy amin'ny Tempolin'i Suwan Kiri Ket
Indrindra be dia be, ny fiara fitateram-bahoaka manontolo no tonga eto amin'ny solontenan'ny tolakandro tsy hay hadinoina any Shina
Saripika avy amin'ny Karon Observation Deck ao Phuket
Saripika avy amin'i Cape Protep
Topimaso ny zaridainam-pirenena Khao Phra Theo ao Phuket
Ity faritra ity dia tahirin-java-maniry voajanahary any avaratry Phuket. Eto dia arovana ny ala voaaro.
Ao amin'ny tontolo voajanahary dia misy bibidia, bera, gidro ary biby mampinono hafa miaina ao aminy, ary koa ny karazam-borona maherin'ny zato. Fa ny tena zava-dehibe dia manana faritany midadasika amana ala kely!
Ity no zaridainam-pirenena lehibe indrindra any Thailand!
Ao amin'ny faritanin'i Khao Phra Theo koa dia misy riandrano lehibe indrindra ao Phuket - Bang pe. Ary eo amin'ny sisin'ny zaridaina dia misy riandrano kely kokoa Ton Sai.
Afaka mandehandeha amin'ireo lalana marobe ianao, na izany aza, dia atolotry ny fomba hitondranao azy fotsiny izany.
Mandeha an-ala any Phuket!
Raha tsy matahotra ny mponina ao anaty ala ianao, dia afaka manandrana mandehandeha amin'ny ala tena izy!
4k ny fitsangatsanganana an-tsoavaly (avy amin'ny riandrano iray mankany amin'ny hafa) dia tena mahaliana!
Tsy misy lalana afa-tsy izay hita, ary isaky ny zato metatra dia misy famantarana manamarina fa tsy very ny lalanao
. Indray mandeha ianao dia hihaona amin'ny birao fampahalalana momba ny "tranainy" miresaka momba ny tokony ho fitondran-tena raha tojo biby fiompy mampidi-doza ianao.
Ny lalana dia tsy zakan'ny rivotra sy ny fanamafisana azy, ary amin'ny toerana dia nanjavona tanteraka. Hisy ny filàna mijera hatrany amin'ny lohasaha ary mivoaka avy ao aminy, miampita renirano miampita vato sy hazo, mianika hazo rava.
Tsy ho mankaleo tokoa izany!
Manantena izahay fa tokony hitandrina tsara, satria io no ala, ary noho izany dia mpitsikilo, bibilava ary solontenan'ny fauna sy flora any an-toerana.
Ity fitsangatsanganana rehetra ity, raha manapa-kevitra ianao, dia miatrika loza mety hitranga ary mampidi-doza ho an'ny tenanao manokana, toy ny eo amin'ny fidirana amin'ny làlana amin'ny andaniny sy ny andaniny roa (amin'ny riandrano) dia hisy kasety fiarovana sy famantarana miaraka amin'ny soratra (mpiasa fotsiny - ho an'ny mpiasa fotsiny).
Torohevitra alohan'ny hitsidihana azy
Na handeha amin'ny fitsangatsanganana toy izany ianao na tsia, fa raha hitsidika ilay zaridainam-panjakana dia mila kiraro mahafinaritra ianao amin'ny fandehanana an-tsokosoko mivatravatra.
Manoro hevitra ihany koa izahay ny hanakatonana ny tongotrao (avy amin'ny kirihitra kirihitra ary ireo olana kely hafa)
Ity zaridainam-panjakana ity dia ivon-panarenana ho an'ireo bbons, misokatra amin'ny mpizahatany ihany koa.
Eo amin'ny fidirana amin'ny Khao Phra Theo dia misy zaridaina elefanta iray izay ahafahan'ny tsirairay mitaingina ireo biby ireo amin'ny sarany fanampiny.
Ora fanokafana ny valan-javaboary Phuket
Misokatra manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 17 isan'andro ny fidirana eto.
Tapakila olon-dehibe 200 baht
Tapakila ho an'ny ankizy - 100 Baht.
Ary eny. Aza adino fa eo amin'ny fidirana amin'ny zaridaina dia misy lay misy sakafo kely, fa ny vidiny dia antsasaky ny avo kokoa noho ny toerana rehetra.
Tonga any, adiresy, fampahalalana momba ny fifandraisana, teboka amin'ny sarintany
Azo atao ny mankany amin'i Khao Phra Theo amin'ny alàlan'ny fandefasana fitsangatsanganana, ary azo atao koa ny manatona ny zotra amin'ny alàlan'ny fiarakaretsaka na fijanonana fiara / bisikileta. Tsy mandeha eto ny fitateram-bahoaka.
telefaonina: + 66 76 311 998
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/4doCuAdp9fkq6aiZ8
Sary avy amin'ny Taman'ny Phuket
Site ofisialy http: //www.phuketzoo.com/
Saripika avy amin'i Phuket Zoo
Sarin'ny fanjakan'ny tigra any Phuket
Naorina tamin'ny 1967 ilay tetezana ary efa nampifandray an'i Phuket tamin'ny tanibe Thailand.
Raha tsiahivina dia somary kely loatra ity tetezana ity noho ny fitomboan'ny fiara. Tamin'ny taona 2011, nisy tetezana hafa natsangana teo akaikin'i Sarasin (Si Songthon), ary i Sarasin dia natao mpandeha an-tongotra fotsiny. Misy fitaovana vita amin'ny sehatra iray koa, mijoro eo, afaka mahita mazava tsara ny Bay Phang Ga ianao. Manakaiky ny dian'i Sarasin, misy ny trano fisakafoanana manompo ny hazan-dranomasina faran'izay tsara indrindra. Ary ho an'ny sasany, ny hoe tsy lavitra ny tetezana any amin'ny tanibe, misy tsena kely izay ahafahanao mividy trondro maina, foza ary anana mony any Thailand (5 baht) mety ilaina ho an'ny olona iray.
Sarin'i Sarasin Sarasin
Kianjan'ny ady totohondry any Phuket (Kianja Boxing Bangla). Overview
Muay Thai. Ady totohondry Thai
Malaza any Thailandy ny fanatanjahan-tena. Miaraka amin'ireo fanatanjahantena fantatra sy tiana eran'izao tontolo izao dia misy ny havan-pirenena. Ny malaza amin'izy ireo dia nanjary muay thai, izay efa ela no nekena ary niparitaka lavitra an'i Thailand. Io karazana gadona haiady io ihany koa dia antsoina hoe ady totohondry Thai.
Ny fihetsiketsehana sy ny fifaninanana amin'ity lalao ity dia tena malaza. mahasarika mpizahatany Thailandy!
Miady fe-potoana 5 ny ady Muay Thai, izay maharitra 3 minitra eo ho eo. Ny singa manan-danja amin'ny ady tsirairay dia ny dihy manokana ary ny vavaka Wye Crew, izay ambara ao amin'ny zoro fiadiana miaraka amin'ny mozika manokana.
Ankehitriny eto amin'ny firenena dia misy mpiady mavitrika Muay Thai maherin'ny 10 ary olona maherin'ny 000 voarohirohy amin'ity fanatanjahantena ity. Miorina amin'ny klioba fanatanjahan-tena manodidina ny 120 izy ireo.
Ho an'ny miaramila sy ny polisy any Thailand, dia tsy maintsy ilaina ny manao an'io art martial io!
Tsara homarihina fa tsy ny lehilahy ihany no nahitana io haiady haiady io, fa koa ny vehivavy any Thailandy. Muay Thai dia nasandratra ho amin'ny fomban-pirenena amin'ity firenena ity!
Any amin'ny faritra afovoan'i Patong (Bangla Road St.) no misy azy. Ny ady totohondry Thailandey dia atao intelo isan-kerinandro (Mua Tai). Matetika, ireo matihanina tena tsara indrindra dia tonga eto amin'ity karazana haingon-doko.
Ny kianja dia misy seza 350. Na iza na iza eto afaka tonga amin'ny fampiofanana amin'ny ady totohondry Thailandey. Notanana amin'ny hariva ihany koa izy ireo, amin'ireny andro tsy misy fiadiana ireny.
Talohan'ny sy mandritra ny ady, angonina dia miangona. Ary izay manangona trosa dia manome soso-kevitra. Izahay anefa dia tsy mila mandefa hihaino azy :). Izy dia liana amin'ny fandresena ara-bola ny andrim-panjakana.
Ny ady no atao amin'ny sokajy lanja isan-karazany, ary eo amin'ny lehilahy sy eo amin'ny vehivavy. Ary na eo amin'ny ankizy.
Matetika isak'alina mandalo 7 -10 ady.
Ny vidin'ny fidirana dia manomboka amin'ny 1100 baht avy amin'ny olon-dehibe ary
от 850 baht amin'ny zaza iray. (2019).
Miakatra ny vidin'ny 2500 baht ho an'ny antsoina hoe seza VIP.
Marihina fa ny seza VIP dia mipetraka akaikin'ny peratra araka izay azo atao, ary avy amin'izy ireo fa matetika tsy hita ny sary ankapobeny ny zava-mitranga amin'ny peratra.
Azonao atao ny misafidy ny sokajy toerana (akaikin'ny peratra), ary afaka mividy tapakila ihany koa ianao amin'ny famindrana any amin'ny kianja sy miverina.
Ny ady dia ampiarahina mozika misy zavamaneno mivantana, izay manafaingana raha aingana ny ady, alohan'ny ady, mandihy ny dihy fanaony ny mpiady, marary sy mihorakoraka ny mpihaino. Mahery vaika ny rivo-piainana, ary natao hanentanana ny mpandray anjara amin'ilay resy, ary miaraka amin'izay koa dia entin'ny mpijery ho tia karokaroka ny mpijery ... izay mora kokoa amin'ny fizarana vola amin'ny alàlan'ny fidiram-bola.
Aiza no misy azy. Ahoana no hahatongavana any. Manondro ny sarintany
Adiresy: 150 55 ถนน ผังเมือง สาย ก Pa Tong, Distrika Kathu, Phuket 83150, Thailandy
Phone: + 66 64 061 5050
Eto ianao dia mahita ny vidin'ny tapakila ary manafatra azy ireo
Alahady 10: 00-23: 45
Alatsinainy 11: 00-22: 00
Talata 10: 00-23: 45
Alarobia 10: 00-23: 45
Alakamisy 11: 00-22: 00
Zoma 10: 00-23: 45
Asabotsy 10: 00-22: 00
Ho an'ireo mpankafy ny haiady martial dia tsy maintsy ilaina ny fitsidihana manintona an'i Thailand
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://g.page/BanglaBoxing?share
Saripika avy amin'ny kianja ady totohondry tany Phuket. Bangla
Tendrombohitra Monkey, Hill Monkey
Ity dia havoana iray izay manakaiky ny tanàna Phuket. Eto no misy zanabola gidro iray. Ireo olona voalohan'ny olona ireo dia tsy matahotra mihitsy, mandehandeha mangingina amin'ny lalana akaiky indrindra, mihantona amin'ny sampana ary manaiky handray fitsaboana amin'ny tanany. Izany dia mitranga fa ny fonosana gidro dia mifatotra ao ambadiky ny fiara na bisikileta iray, izay toa mampihomehy avy amin'ny sisiny. Eo an-tampon'ny havoana misy sehatra iray izay ahafahana mijery ny tanàna Phuket.
Izy io no toerana tsara harahina koa. Ary fahafahana lehibe mijery ny gidro amin'ny toe-javatra voajanahary ho azy ireo toy izay any amin'ny zoo rehetra.
Afaka miakatra amin'ny tendrombohitra misy gidro ianao na bisikileta, na dia nitranga aza ny tsy navelan'ny mpiambina hiditra tao. Fa amin`ity tranga ity dia azo atao tsara ny miakatra an-tongotra. Tsy hisy ny zavatra sarotra eo amin'ity fiakarana ity.
Fampitandremana! Mahazo manaikitra ny gidro
Aleo ny tsy adino fa ny biby dia ny biby dia bibidia, ary eo amin'ny faritaniny ianao ary midika izany fa tokony hohajaina ny lalàny. Ary raha miaraka amin'ny ankizy ianao, dia amporisiho izy ireo mba tsy hanao zavatra maloto, hampielezana ny tanany eo anoloan'izy ireo. Ny gidro dia mety hiatrika fihetsika tahaka izany.
Azonao atao ny mamina ny gidro, nefa tandremo. Isan'andro amin'ny 10.30 dia omanin'ireo mpikarakara an'io toerana io izy ireo. Mandra-pahatongan'ity indray mitoraka ity, ary koa aorian'ny fotoana kelin'ny fotoan-tsakafo ity dia mila mahatakatra ianao fa ny gidro dia noana ary vonona hanina betsaka :). Indrindra indrindra, ny hakana kitapo sakafo avy aminao, tavoahangy mineraly iray, satria izy ireo no tanjona voalohany.
Manoro hevitra ihany koa izahay fa hanaisotra solomaso, satroka sy firavaka alohan'ny hitsidihana anao. Noho izany rehetra izany, ho an'ny fialam-boly dia mety alaim-panahy ny gidro. Raha ny zava-misy dia mety tsy hanambany ny kitapoilinao izy raha misy zavatra manitra fofona avy aminy.
Alika velona, ​​miaraka amin'ny gidro. Ary koa, raha miakatra ianao, dia mijoretra ny rajako. Any amin'ny fara-tampon'ny tilikambo amin'ny fahitalavitra, dia miaina fotsiny ny olona mahery setra indrindra.
Miankohoka eo am-pototry ny havoana, eny an-dalana, mivarotra akondro, voanjo ary zavatra hafa tian-drambo ny fitiavana.
Amin'ny ankapobeny, ity toerana ity dia mamela olona vitsy tsy hiraharaha, ary azo antoka fa ho an'ireo izay tany Thailand no sambany.
Torohevitra iray. Mitandrema. Ny gidro dia tsara tarehy, mazava ho azy, nefa mbola biby dia.
Ahoana no hahatongavana any. Address.
Manakaiky akaiky ny Phuket Town
Address: Ratsada, Distrikan'i Mueang Phuket, Phuket 83000, Thailand
telefaonina: + 66 61 990 6646
Manondro ny sari-tany - https://goo.gl/maps/wiuHaXH3bFKEhUdS9
Sary avy amin'ny Monkey Mountain any Phuket
Milomano anaty rano mikoriana
Photo Waterfall Bang Pae
Avy amin'ny renirano iray mankany amin'ny hafa iray dia misy lalambe iray izay manakatona ny mpizahatany amin'ny ala, maharitra 4 km. Nakatona ara-panoharana io (famantarana ny "mpiasa tokana"); hatramin'izay fotoana izay, ny mpizahatany mankasitraka ny fialan-tsasatra mahery vaika dia mametraka ny tena mikaroka amin'ny ala izy ireo. Misimisy kokoa momba ny "mandeha" toy izany eto.
Fidirana amin'ny zaridaina manodidina ny famantaranandro, fa marina, ny ala iny dia tsy ilay toerana tsara indrindra handehanana ambanin'ny volana
Sary an'i Ton Sai Waterfall Photo
Raha ny marina dia io andian-drano io dia andian-kaona arahin'entana tsara hita eo afovoan'ny ala. Afaka milomano ao amin'ity riandrano ity ihany ianao. Tena mangatsiaka tokoa ny rano, saingy raha ny fahitana fa misy torapasika eo akaiky eo, mazava ho azy fa tsy noho ny fiakaran'ny rano io riandrano io.
Photo Kathu Falls
Ranon-tany Ton Ao Yon. Overview
Ity dia ny riandrano Ton Ao Yon no mety ho riandrano miafina indrindra ao Phuket. Tsy voamarika akory amin'ireo sarintany mitsangatsangana marobe.
Ary tena tsy mahagaga tokoa izany. Amin'ny vanim-potoana ambony, toa toy ny lohasa maloto no miboiboika eo amin'ireo vato, saingy mila manome azy ianao, amin'ny vanim-potoana ambany, orana manome tanjaka ampy azy io mba ho toa toy ny riandrano. Feno manodidina ny ala sy vato Photographic, farafaharatsiny farafahakeliny io riandrano io, fa manintona mpizaha tany izay mankasitraka ny natiora sy ny fanenjehana tsy misy hala-bato amin'ny alàlan'ny ala sy ny vato malama.
Ity riandrano ity dia misy cascadeses roa, ary aloha dia hihaona amin'ny riandrano kely ianao, ary raha miakatra amin'ny rano ianao, dia misy riandrano lehibe kokoa. Saingy tsy dia tsotra loatra ity làlana ity, ary any amin'ireo toerana ilanao mandehandeha amin'ny rano (lalina-dohalika).
Amin'ny alàlan'ny fomba, ao anaty vilan'ny riandrano kely ianao dia afaka milomano tsara raha tsy matahotra. Masira ny rano eo, fa tsy mangatsiaka ihany. Ny vilia manokana dia 5 metatra ny savaivony.
Noho ny fisian'ny mpizahatany tsy fahita eto dia feno sy voaroan'ny tsiro Thai fotsiny io toerana io. Matetika milatsaka eto ny toerana eto an-toerana, miakatra mihoatra ny riandrano eny anaty vatolampy ary mankao anaty ala. Mampalahelo fa avelan'izy ireo ny fako ao ambadika.
Ton Ao Yon Falls dia 150 metatra avy amin'ny làlambe akaiky indrindra. Ary ireo lalambe ireo dia mila mamakivaky ny ala mikitroka, noho izany dia asaina hanana fanamiana mety ho an'ny dia an-tongotra ireny.
Eny, mazava ho azy, ny zavaboary tsy voafetra amin'ny flora, izay midika fa afaka mihaona ihany koa ny solontenan'ny fauna ao an-toerana - mpitsikilo hazo vita amin'ny palma, bibilava ary zavamananaina hafa, mahatsapa ny fahafahany eto.
Amin'ny ankapobeny, ny toerana dia mendrika tsara ny fifantohana eo amin'ireo mpankafy ny mandehandeha any anaty ala. Ny toetra pristine, alokaloka be dia be ary ireo toetra hafa any anaty ala dia miantoka anao.
Manoro hevitra ny hisotro rano fisakafoanana sy maivana aminao izahay, indrindra fa raha mikasa handeha amin'ny ala kely ianao. Ny birao sy ny tombontsoa hafa amin'ny sivilizasiana dia tsy hita eto.
Ho an'ny endrika fitsidihana rehetra dia tokony ho mety amin'ny alàlan'ny ala ny akanjo. Dimanjato sy sasany metatra miala ny goavambe mankany amin'ny riandrano dia mandeha amin'ny lalana manaraka ny ala ambany. Zavamaniry matevina dia hita any amin'ny toerana, koa mitandrema tsara.
Ity riandrano ity dia mipetraka amin'ny Cape Panwa. Ny eo akaikiny, ilay vohitra kely an'i Cape Panwa kely, izay tsy dia mahalala firy amin'ny tongotry ny mpizahatany, ka izany no antony manamarina sy maro loko.
Fifandraisana. Address. Manondro ny sarintany
Maimaimpoana ary misy isan-taona ny fitsidihana mandritra ny ora hariva.
Address: Wichit, Distrika Mueang Phuket, Phuket 83000, Thailand
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/iGqABtbz6D9i5kuq7
Sary an'i Ton Ao Yon Waterfall